စံပယ်ပန်း: September 2010
စာပေဟောပြောပွဲသို့ နောက်ကျမှ သွားနိုင်သည်..။ ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့ ဒုတိယမြောက်ဟောပြောနေသည့် ဆရာမောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) ပြီးတော့မည်..။ ခဏအကြာ ဘရိတ်တိုင်းမ် ပေးသည်..။ ဒံပေါက်ဘူးများကို အပြင်မှာပင် မတ်တပ်ရပ်ကာ စားကြသည်..။ အအေးက လက်မှတ်ပြကာယူရသည်..။ အားလုံးအဆင်ပြေသည်..။ အေးဆေးပင်..။
ဆရာအော်ပီကျယ်ဟောသည်ကိုမှ အစအဆုံးမီသည်..။ ဆရာပြောလိုသည့် လိုရင်းက မြန်မာများ မြန်မာပြည်ကိုအကျိူးပြုနိုင်သောသူများဖြစ်စေချင်သည်..။ အပေါ်မှဆွဲတင်သည်ထက်စာလျှင် အောက်မှပုခုံးဖြင့်ထမ်းတင်ပေးသူများက ပိုကူညီရာရောက်သည်..။ ဆရာတော် ရှင်ဇနကာဘိဝံသက ဟောထားသည်..။ နာတရား ၊ ဟောတရား၊ အလုပ်တရားတို့တွင် အလုပ်တရားသည်သာ အကောင်းမွန်ဆုံးဟု..။ ထို့ကြောင့်ဆိုလိုချင်သည်က ဟောပြောနေသည်နှင့်မကျေနပ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်တတပ်တအားပါဝင်စေချင်သည်ဟု ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချမိပါသည်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/26/2010 11:50:00 pm0comments
စင်ကာပူမှာရောက်နေသော ကျွန်တော့်အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးသည်..။ သူ့ကိုကျွန်တော်မှမဟုတ်..။ သူငယ်ချင်းအားလုံးက ချစ်ကြသည်..။ ဘာ့ကြောင့်လဲဟု ကျွန်တော်ဆန်းစစ်ကြည့်သောအခါ စိတ်ရှည်သည်းခံကာ သူငယ်ချင်းအားလုံးအပေါ် အကောင်းမြင်ပေးတတ်သောစိတ်ကြောင့်ဟု ကျွန်တော်မြင်မိသည်..။ သူ့ကိုလူတိုင်းနီးပါးက ခင်ကာ ရေရှည်ဆက်ဆံချစ်ခင်ကြသည်..။ အနေအေးဆေးတည်ငြိမ်ကာ စိတ်အေးချမ်းသော ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းနှင့် တွဲလျက်ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော့်ဘလော့တွင်တင်ရန်ကြိုးစားသည်မှာ ကြာပြီ..။ မအောင်မြင်သေး..။ သူငယ်ချင်းက သူ့ပုံကိုတင်မည်ပြောသောကြောင့် ရှက်နေသည်..။ အခုလည်း သူနဲ့ တစ်ညနေလုံးအတူရှိခဲ့သည်..။ ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်က မသာ..။ နောက်တော့ ရိုက်ရဦးမည်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/26/2010 11:41:00 pm0comments
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/23/2010 04:10:00 pm0comments
Attention isa"collection of tensions that can be resolved only by getting the facts or ideas that the speaker is trying to convey."
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/23/2010 04:00:00 pm0comments
Information presented in class often contains the central concepts of the course and the material most likely to be included on exams. Yet, students frequently do not realize the importance of notetaking and listening. The following handouts provide tips on how to recall more information from your lectures through active listening and purposeful notetaking. In addition, lecture notes can beacritical tool for preparing for exams. Suggestions are provided for how to use your notes regularly to review.
Listening is an essential learning tool, however, humans are poor listeners. Research shows that individuals can only recall 50% of what they hear and that 20-30% is incorrect! The following documents outline ways to improve your listening habits and retain more information from class.
Learning by Listening (21K Word)
Ten Bad Listening Habits (28K Word)
While many students view notetaking as an activity conducted simply in lecture, solid notetaking skills require preparation and reflection as well. Your class notes can serve as an important tool for reviewing for exams and distilling key concepts. The following handouts provide suggestions on ways to take good notes and use them well. The key is to developasystem that enables you to :
Taking Lecture Notes (26K Word)
The Cornell Note Taking System (21K Word)
Taking Notes for Others (22K Word)
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/23/2010 12:54:00 am0comments
Insufficient interaction with peers or adults socially
Neglect of norms and values
Difficult to test synthesis
If drill and practice is used, it can lead toasingle perspective
Focus on self-interest and personal success, and ignores the success and/or failures of others
No support system from peers
Insufficient knowledge to draw from ones self
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/23/2010 12:14:00 am0comments
Good for introverts and shy learners
Safe, free from peer pressure
Challenged by competing with oneself (doing better next time)
Curiosity (can explore new interesting facts without justifying it to the group)
Control (use own time and sequence, do not need to report to others)
Fantasy (allowing oneself to daydream on certain aspects of the work)
Can accommodate own learning style, cognitive style and learning approach
Can work on own time and at own pace
Practice skill as often as you wish, to master it.
Develops personal gratification
Opportunity for authentic learning to take place based on the individual learning style
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/23/2010 12:10:00 am0comments
စင်ကာပူလာဖို့ပြင်ဆင်တာတွေကိုပြောဖို့မဟုတ်ပါ..။ စင်ကာပူရောက်ကာစ ရက်များက အသားမကျခင်က ကြုံရသည်များကို ပြောလိုခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်..။
စင်ကာပူမလာခင်ကတည်းက ဖော်ဝပ်မေးလ်များထဲမှ ဖတ်ရသည်များက စင်ကာပူတွင် သရဲပေါသည့်အကြောင်း..။ ဓာတ်လှေကားများတွင် ခြောက်တတ်သည်ဟု ဖော်ဝပ်မေးလ်တစ်စောင်တွင် ဖတ်ရဖူးသည်ကို အစွဲကြီးစွဲနေသည်..။ ဓာတ်လှေကားစီးတိုင်း ဘုရား၊တရား၊သံဃာကို ရှိခိုးပါ၏ဟု စိတ်မှအမြဲ ရွတ်ဆိုနေမိသည်..။ တကယ်ကတော့ ကြောက်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကြောက်အောင် ရဲဆေးတင်နေခြင်းသာ..။
စင်ကာပူကို သူငယ်ချင်းများအလုပ်ပိတ်သော တနင်္ဂနွေနေ့ကို အသေအချာရွေးကာလာခဲ့သည်..။ သူတို့ကို ဟိုနားဒီနားဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာကစ လိုက်ပြပေးစေချင်သောကြောင့်..။ တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူနေလိုက်ရသောကြောင့် ဘာအခက်အခဲမှမရှိ..။ တနင်္လာမှာ တစ်ယောက်တည်း အိမ်ကစထွက်ကာ run ရတော့သည်..။ ပြန်လာသောအခါ ဓာတ်လှေကားစီးမည်လုပ်သောအခါ ဓာတ်လှေကားတံခါးကြီးက ပွင့်နေသည်..။ ကိုယ်ကခလုတ်မနှိပ်ခင် ပွင့်နှင့်နေသော ဓာတ်လှေကားကြီးကို ပျက်နေလို့ပွင့်နေတာဟု ယူဆကာ ခလုတ်ကို ဆက်နှိပ်နေမိသည်..။ အကြောင်းထူးမလာ..။ ခလုတ်နှိပ်နေစဉ် တရုတ်အမျိူးသမီးတစ်ယောက် ရောက်လာကာ တံခါးပွင့်နေတယ် လာလေဟု တရုတ်စကားနှင့်ခေါ်မှ အော်... မြေညီထပ်မှာ ဓာတ်လှေကားက ကြိုစောင့်နေတာပါလားဟု သဘောပေါက်သွားသည်..။ ကိုယ်ကတော့ မသိ..။ ပျက်နေတာဟု တွေးခဲ့တာဖြစ်သည်..။ (ဟိဟိ..။)
တစ်ရက်ကျတော့ ဓာတ်လှေကားစီးရမှာ သရဲကြောက်လို့ လန့်နေပါတယ်ဆိုမှ နေ့လည်ခင်းအပြင်ထွက်ဖို့ အိမ်ကထွက်လာရသည်..။ ဓာတ်လှေကားခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ စောင့်နေစဉ် အလယ်မှ ဓာတ်လှေကားက တံခါးပွင့်လာသည်..။ အားးးးးးးးးးးးးးးးးးးး....။ လန့်ကာ မှင်တက်မိသွားမိသည်..။ ဓာတ်လှေကားထဲမှာ အဘိုးကြီးတစ်ယောက်နှင့် အမျိူးသမီးတစ်ယောက် ပါလာနှင့်သည်..။ တစ်ခါမှ လူပါလာသည့် ဓာတ်လှေကားကိုမကြုံဘူးသေးပါ..။ တော်တော်လန့်ကာ အသံပင်ထွက်သွားမိသည်..။ အဘိုးကြီးက လန့်သွားမှန်းသိကာ အပေါ်ကတည်းက လူပါလာကြောင်း မလန့်ဖို့အကြောင်း တရုတ်လိုပြောနေသည်..။ နားမလည်သော်လည်း အဲလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောနေသည်ဟု ယူဆမိသည်..။ ရင်ဘတ်ထဲကပင် တဒိတ်ဒိတ် ခုန်လာမိသည်..။ ကျွန်တော်များ ကြောက်တတ်ချက်..။ (ဟိဟိ)
အခုတော့ဓာတ်လှေကားစောင့်စဉ် ကျလာမည့်ဓာတ်လှေကားကို သေချာအောင်ကြည့်တတ်လာပါပြီ..။ လူပါမပါကိုပါ..။ (ဟား ဟား)
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/21/2010 04:37:00 am2comments
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/11/2010 11:50:00 pm0comments
ရေးချင်တာတွေလျှောက်လျှောက်ရေးထားတဲ့ ဘလော့ကို သူများကိုဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းမိတာ အားနာမိလာတယ်..။ အွန်လိုင်းပေါ်တင်ထားပေမယ့် နေ့စဉ်မှတ်တမ်းသာသာပဲရှိတဲ့ ဘလော့ကို သူများတွေကို ဖတ်ခိုင်းမိတာ အားနာမိတယ်..။ အရေးအသားကလည်းမကောင်းလို့ တင်ထားသမျှပို့စ်တွေအကုန်လုံးလည်း ဖျက်ပစ်ချင်မိတယ်..။ ကိုယ်ဘာသာ ကိုယ့်ဒိုင်ယာရီလေးနဲ့ပဲ ပြန်ရေးရင် ကောင်းမလားလို့လည်း စဉ်းစားမိတယ်..။ ဘလော့မှာတင်မကဘဲ လျှောက်ရေးသမျှဖိုရမ်တိုင်းက ပို့စ်တွေပါ ပြန်ဖျက်ပစ်ချင်နေတယ်..။ စာအရေးအသားလည်းမကောင်းဘဲနဲ့ လျှောက်ရေးမိလို့..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/09/2010 11:00:00 pm0comments
ဒီနေ့မနက်အိပ်ယာနိုးတော့ နှောင့်ယှက်ရမယ့်သူက နှောင့်ယှက်လို့မရတာနဲ့သီချင်းဖွင့်နားထောင်နေမိပါတယ်..။ မနေ့ညက စာပေဟောပြောပွဲ You Tube ကိုကြည့်ရင်း ကိုမင်းနောင်ဆိုတဲ့ ထိလုမိုးဆီ(တစ်ရေးချစ်ခွင့်မြင်ရနိုး)ဆိုတဲ့ အလွန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့သီချင်းကို ပြန်ကြားမိရာက You Tube ထဲမှာ ကိုမင်းနောင်ရှာရင်း လိုက်အော်ဆိုရင်း နားထောင်နေမိပါတယ်..။ သီချင်းကလည်းရွေးရင်းရွေးရင်း ရွေ့ရွေ့သွားလို့ ဟိုရောက်လိုက် ဒီရောက်လိုက်..။ နောက်တော့ အလွမ်းသီချင်းတွေဘက် ဂန္ထ၀င်သီချင်းတွေဘက်ရောက်သွားရင်း အကျယ်ကြီးလိုက်အော်ဆိုရင်း ရယ်ချင်နေမိပါတယ်..။ အဲလိုမဆိုဖြစ်တာကြာပြီ..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/09/2010 09:30:00 pm0comments
အင်ဖော်မေးရှင်းရဲ့ ထူးခြားတာလေးတွေ ပြောချင်ပါတယ်..။ သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်လို့ပြောထားတဲ့အချက်လေးတွေကိုဖတ်ရတော့ အားလုံးသိထားသင့်သလားလို့ပါ..။ ဘာသာတိုင်းမှာ သူ့ကောင်းချက်ကလေးတွေနဲ့သူ ရှိမှာပါနော်..။
"Information is an unusually powerful commodity. It provides the heart of the development of knowledge the basis for innovations, the resources for an informed citizenry and thereby, it becomes the key commodity for the progress ofasociety.
Nations will flourish or fall depending upon the availability of leaders, professionals and citizens who have been educated to understand the power of information and have access to it for decision making and solving the problems of their society. "
အော့စလန်က ၁၉၈၉ တုံးကပြောခဲ့တာလေးပါ..။
အင်ဖော်မေးရှင်းဆိုတာ ထူးခြားတဲ့ စွမ်းရည်ပြည့်ဝတဲ့ လူသုံးကုန် တစ်ခုပဲ .. ဒီအရာက လူသားတွေ ဗဟုသုတ တိုးတက်ဖို့ အတွက် အဓိက ဖြစ်သလို
အင်ဖော်မေးရှင်းရရှိတဲ့အဓီက အရင်းအမြစ်က အခြေအမြစ် ခိုင်မာမူရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒီ အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်ဖို့ အတွက် .. အဓိက သော့ချက်တစ်ချက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်တယ်
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ တိုးတက်မူဟာ . အဲဒီနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင် တွေအတတ်ပညာရှင်တွေ နိုင်ငံသားတွေရဲ့အင်ဖော်မေးရှင်း ပါဝါကို နားလည်နိုင်စွမ်း ရှိမူအပေါ်မူတယ်
ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ အင်ဖော်မေးရှင်းပါဝါက .. အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးဖို့ ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ဖို့တွေလည်း စွမ်းအင် အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနေလို့ ပဲ
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/09/2010 03:49:00 am0comments
ခပ်ညည်းညည်းလေးဆိုလိုက်ရင် ဆိုလို့ကောင်းတဲ့သီချင်းလေး..။ ရှားရှားပါးပါး အမေသီချင်းဆိုတာ ကြားမိတဲ့ တစ်ပုဒ်တည်းသော သီချင်းလေး..။ အမေဆိုလို့မှတ်ထားမိတဲ့သီချင်းလေးကို ကြီးလို့နားထောင်တတ်လာတော့ ရှာပြီးနားထောင်မိရင်း အရမ်းကြိုက်မိတဲ့သီချင်းလေး တိုက်ဆိုင်လာလို့ တင်ထားလိုက်တာပါ..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/09/2010 12:03:00 am2comments
Information Studies ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်မှာ Information Management ၊ Information Sources and Searching၊ Information Storage and Retrival ဆိုတဲ့ မယူမနေရ Core Subject သုံးခုကို ယူရပါတယ်..။ ဒီဘာသာရပ်တွေကို လေ့လာကြည့်တော့ တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာ တွေ့ရပါတယ်..။ Information တွေ ဘယ်လိုရှာမလဲ၊ ဘယ်လိုသိမ်းမလဲ၊ ဘယ်လို manage လုပ်မလဲဆိုတာ သင်ယူရပါမယ်..။
Information Management မှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုခု ဆိုတဲ့ Organization တစ်ခုရဲ့ intelligence level ကောင်းမကောင်းကို Connecting,Sharing,(Re)Structuring ဆိုတဲ့ အချက်သုံးချက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့..။
Connecting: The ability to link to various information sources,media,locations and individuals for capturing accurate information and making it available to the right user at the right time and place.
အင်ဖော်မေးရှင်း sources တွေ မီဒီယာတွေ သတင်းဖြစ်ပေါ်ရာနေရာတွေ တစ်ဦးချင်းသီးသန့်တွေဆီက ရလာတဲ့သတင်းတွေဟာ မှန်ကန်တဲ့လူတွေဆီ မှန်ကန်တဲ့အချိန်နဲ့နေရာမှာ အတိအကျရောက်သွားနိုင်ရမယ်..။
Sharing: The ability to integrate and share information in the organization for proper understanding and interpretation.
သင့်တော်တဲ့ နားလည်မှူ ကြားခံပေးမှူတွေနဲ့ သတင်းတွေကို ဝေမျှပြီး စုစည်းပေးနိုင်ရမယ်..။
(Re)Structuring: The ability to extract meaning from data by matching and relating information from multiple sources for obvious patterns or trends.
ထင်ရှားတဲ့ပုံစံတွေအတွက် sources အမျိူးမျိူးကနေရလာတဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အင်ဖော်မေးရှင်းတွေကို တွဲစပ်ပြီး အချက်အလက်ဒေတာတွေကို ထုတ်နုတ်ပေးနိုင်ရမယ်..။
ဒီအချက်သုံးချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီး မိမိပြောချင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ဘယ်လောက်ထိ Connecting ကောင်းလဲ၊ Sharing ကောင်းလဲ၊ Restructuring ကောင်းလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးကြပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိတဲ့ organization ဟာ ဘယ် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ.. ။ ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ ကျွန်တော်က အင်္ဂလိပ်စာကို အပြည့်အ၀နားလည်တဲ့သူနဲ့အတူဆွေးနွေးရပါတယ်..။ ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတာ ပြန်မေးပြီး ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဟာ ဘယ်လောက်ထိ connecting ကောင်းလဲ၊ sharing ကောင်းလဲ၊ Restructuring ကောင်းလဲဆိုတာ အမှတ်ပေးရပါတယ်..။ right time နဲ့ right user လို့ပြောတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဟာ Connecting မှာ 1 အနိမ့်ဆုံးကို ပေးကြပါတယ်..။ ဆိုးပါတယ်..။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် သနားမိပါတယ်..။ နောက် Sharing နဲ့တူတဲ့ Information Processing မှာ တော်တော်ကောင်းလို့5ပေးကြပါတယ်..။ ၁ ကနေ ၉ ထိ ပေးလို့ရပါတယ်..။ Information Sharing မှာ လူကြားမကောင်းလို့ ကြားချပြီး ၄ ပေးခဲ့ပါတယ်..။ နောက်ဆုံး Organizational Restructuringမှာတော့ အကောင်းဆုံး ၉ တောင်ပေးချင်တာ မကောင်းတာနဲ့ ၈ ကို ပေးခဲ့ကြပါတယ်..။ ပြီးမှ ပရော်ဖက်ဆာနဲ့ ဘာ့ကြောင့်ဒီလိုပေးလဲဆိုတာ ပြန်ဆွေးနွေးကြပါတယ်..။ ဆရာမျက်လုံးပြူးပါတယ်..။ ကျွန်တော်က မျက်နှာမထားတတ်ပါဘူး..။
ဘာလို့မှရေးတာမဟုတ်ပါဘူး..။ သီအိုရီတွေကို စိတ်ကူးနဲ့အကောင်အထည်ဖော်ကြည့်နေတာ ဖြစ်များဖြစ်မလားလို့ပါ..။ နောက်တော့ ငါ့အိမ်မှာရော ငါဒီသီအိုရီတွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်လားလို့ပြန်မေးမိတော့ ကိုယ့်စိတ်ကူးကို ဒီတင်ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/07/2010 11:38:00 pm0comments
မီးတို့စားခဲ့တာတွေ..။ မမေ့အောင်လို့ မှတ်တမ်းတင်ထားတာ..။ ဟိဟိ..။ ဒီဘက်က ဘဲကင်..တစ်ခုကအရွက်ကြော်..။ ဟိုတစ်ခုက ဘာခေါ်မှန်းမသိဘူး..စားလို့တော့ကောင်းတယ်..ဟိဟိ..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/06/2010 11:38:00 pm0comments
ဘယ်အစွန်မှ လူဆိုးကြီး လေးပွ..၊ အင်္ကျီအနက်နှင့် ကိုဖြိုး..။ ဒီညာဘက်စွန်က ဦးဒိပါဘူး..မီးမီးပြောတဲ့အထဲမှာ..။ ဟဲဟဲ..။ အဲဒီနေ့က ဦးဒိက ကျွေးတာမို့လေ..ဟဲဟဲ...။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/06/2010 11:36:00 pm3comments
သောမတ်စ်ကိုအကြောင်းပြပြီး မီးကလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တာ..။ ကိုယ်ချည်းပဲခဏခဏရိုက်တင်နေရင် ဘယ်ကောင်းမလဲနော်..။ ဒါမို့လို့ သောမတ်စ်လေးအကြောင်းပြပြီး ဓာတ်ပုံအရအမိရိုက်တော့တာပဲ..။ ဟိဟိ..။ သောမတ်စ် စိတ်ကြည်နေတုံး အတင်းချော့မြူပြီး မမမူမူကို ရိုက်ခိုင်းတော့တာပဲ..။ ဟိဟိ..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/06/2010 11:20:00 pm 1 comments
သောမတ်စ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာ အမေနဲ့တူလို့နော်..မမမူမူ...။ ဟိဟိ..။ အစ်တိုထွန်းပါဘူး..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/06/2010 11:17:00 pm0comments
အိုး..........ဘယ်သူမချစ်ဘဲနေနိုင်မလဲကွယ်..။ ချစ်စရာ့သောမတ်စ်ကလေး..။ အလွန်ဆော့ပြီး ထိန်းသိမ်းမနိုင်တာကလွဲရင် အားလုံးကောင်းပါသည်..။ ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/06/2010 11:12:00 pm0comments
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/06/2010 12:34:00 am0comments
စင်ကာပူမှာကျောင်းတက်မယ်ဆိုတော့ ကျောင်းစားရိတ်ကို လက်ငင်းပေးနိုင်တယ်ထား..၊ နေစားရိတ်ကြေအောင်တော့ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေဝင်လုပ်ကြတာ မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူတင်မက..၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းရဲ့ ထုံးစံတစ်ခုပါ..။ သတ္တိနည်းတဲ့ကျွန်တော်က သူများတွေလုပ်လို့ လမ်းကြောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုမှ လျှောက်ရဲတာပါ..။ ဒီတော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက ကျောင်းပြီးသွားပြီ..။ ကျွန်တော်က စင်ကာပူကိုလာဖို့ တွန့်နေလို့ ခုမှ လာရတာပါ..။ ဒီတော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေလျှောက်တဲ့လမ်းကို ကျွန်တော်လျှောက်ပါတော့တယ်..။ ဒီမှာ တောက်တိုမယ်ရ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လေး လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာ..။
ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ အလုပ်က ၁၀ မိနစ်လောက်အသွားအပြန်နေရာမှာ လုပ်ရပါတယ်..။ နေတဲ့အခန်းက ဈေးနီး၊ ကားဂိတ်နီး၊ ရထားဂိတ်နီးမို့ အဆင်ပြေပါတယ်..။ အလုပ်ကလည်း ဈေးထဲမှာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်..။ ဈေးရောင်းတယ်ပေါ့ဗျာ..။ ဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့ လိုအပ်တာမှန်သမျှလုပ်ပေးရတဲ့သူလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်မိပေမယ့် အဲလိုအတန်းအစားခွဲခြားတာမရှိပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် သိပ်မတတ်သေးတဲ့သူကိုတော့ သူတို့မလုပ်ချင်တာတွေခိုင်းဖို့ချန်ထားပါတယ်..။ အနှစ်နှစ်အလလက မလှည်းကျင်းခဲ့ရတဲ့အမှိူက်တွေ လှည်းခိုင်းတာမျိူး..၊ ဆိုင်ရှေ့ထွက်ပြီး ဈေးရောင်းခိုင်းတာမျိူးတွေကို အချိန်ပိုင်းလာလုပ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ခိုင်းပါတယ်..။ ပထမရက်စလုပ်တော့ ချောကလက် ပရိုမိုရှင်းနဲ့တိုးပြီး ဆိုင်ရှေ့မှာဈေးထွက်ရောင်းခိုင်းပါတယ်..။ ဖိလစ်ပိုင်တွေပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်ကို နားမလည်ပါဘူး..။ တရုတ်တွေပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်ကလည်း တော်တော်ဆိုးပါတယ်..။ သူတို့တရုတ်စကားနဲ့ လိုသလိုဆွဲပြောကြတဲ့စကားတွေကို တော်တော်နဲ့နားမယဉ်ပါဘူး..။ ဒီမှာနေတာ သုံးနှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ညီမလေးကတော့ သူတို့နဲ့လုံးဝထပ်တူအဆင်ပြေနေပါပြီ..။ ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတာ အဲဒီညီမလေးကိုပြန်ပြန်မေးရပါတယ်..။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုရယ်ချင်ကြပါတယ်..။ ကျွန်တော်က နားမလည်တော့ Incharge ကို နှာခေါင်းရှုံ့ပြလိုက်ပါတယ်..။ နားလည်လားမေးရင် ခေါင်းယမ်းပြလိုက်ပါတယ်..။ ကျွန်တော်မှနားမလည်တာ..။ အချိန်ပိုင်းလာလုပ်တဲ့သူကို ပေးတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့တန်အောင်တော့ လုံးဝနားမနေရအောင် ခိုင်းပါတယ်..။ တစ်ဆိုင်လုံးတံမြက်စည်းလှည်းရတယ်..။ အေးအေးဆေးဆေးလှည်းနိုင်ပါတယ်..။ အိမ်မှာလည်းလှည်းနေကျဆိုတော့လေ..။ တံမြက်စည်းကိုအိမ်မှာလိုအကြာကြီးမလှည်းရတာကြာလို့ လက်နာတာတစ်ခုပါပဲ..။ အဆင်ပြေပါတယ်..။ ဆိုင်ရှေ့ထွက်ပြီးဈေးရောင်းပြီးရင် ဆိုင်ကမှန်တံခါးတွေကိုပိတ်လိုက်ပြီးရင် ပစ္စည်းတွေကို လိုက်စီရပါတယ်..။ နောက်ဆုတ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ရှေ့တိုးရတာပါ..။ လာလုပ်တဲ့သူပေါရင် တစ်ယောက်အဲဒါလုပ်နေရင် နောက်တစ်ယောက်ကို တံမြက်စည်းလှည်းခိုင်းထားပါတယ်..။ ပြီးတာနဲ့အမှိူက်ပစ်..။ အမှိူက်ကိုလည်း တစ်ယောက်ယောက်ဝင်ပစ်သွားပါတယ်..။ ပစ်တတ်အောင်လို့ လိုက်ကြည့်ထားရပါတယ်..။
ိ သူတို့က ငွေသိမ်းကောင်တာကို ကိုင်ခိုင်းချင်နေပါတယ်..။ ကျွန်တော်က လုံးဝမရင်းနှီးတာနဲ့ သူတို့ခိုင်းလို့မရသေးမှန်းသိလို့မခိုင်းသေးဘဲ စောင့်ကြည့်နေတာပါ..။ ဘဏ်ကဒ်အမျိူးမျိူး၊ ဈေးဝယ်ပုံအမျိူးမျိူး၊ ရာခိုင်နှူန်းတွက်တာ အမျိူးမျိူးနဲ့ ကျွန်တော်မရင်းနှီးသေးပါဘူး..။ တစ်ဖြည်းဖြည်းတော့တတ်အောင်သင်မှာပါ..။ ဒါတွေနဲ့ကင်းတာမရှိဘူးဆိုတော့ လုပ်ရမှာပါပဲ..။ အချိန်ပိုင်းအလုပ်ကို နေစားရိတ်နည်းနည်းခုအောင်လို့သာလုပ်ချင်တာမို့ သိပ်ခေါင်းခဲတာမျိူးကြီးမလုပ်ချင်ပါဘူး..။ အလုပ်ထဲမှာဘာတွေပြောပြော ဘယ်လိုရှိရှိ သိပ်စိတ်ထဲလည်း မရှိပါဘူး..။ ဒါက ခဏယာယီလုပ်တဲ့အလုပ်လို့ စိတ်ထဲသဘောပိုက်ထားလို့ သူတို့ဘာပြောပြော ခေါင်းထဲသိပ်မထားပါဘူး..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/06/2010 12:15:00 am0comments
စာကိုစိတ်ဝင်စားသောကျွန်တော့်အတွက် စာကြည့်တိုက်များကို ရင်ခုန်လှပါသည်..။ မည်မျှပင် E-Books များ ပေါပါသည်ဆိုသော်လည်း လက်နှင့်ကိုင်ကာဖတ်ရသော စာအုပ်များလောက် နှစ်ခြိုက်မှူ မရှိလှပါ..။ စာဖတ်ခြင်း၏အကျိူးကျေးဇူးကိုယုံကြည်သူပီပီ စာကြည့်တိုက်များကို ချစ်ခင်လှပါသည်..။ NTU စာကြည့်တိုက်ကြီး ကြီးမားခန့်ထည်လှသည်ဟု ကြားဘူးနေသည်မှာ ရောက်ကတည်းကပါပင်..။ မည်သည့်ကျောင်းကိုရောက်ရောက် စာကြည့်တိုက်များသို့ ရောက်အောင်သွားတတ်သည်မှာ ကျွန်တော့်အကျင့်တစ်ခုပါပင်..။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လှသော စာကြည့်တိုက်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကျွန်တော်ချစ်သည်..။ NTU ကျောင်းစာကြည့်တိုက်သို့ရောက်အောင်သွားမည်ဟု မရောက်ခင်ကပင် စိတ်မှာတေးထားမိသည်..။
ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော့်လက်ချာတွေ ပရင့်ထုတ်စရာရှိသည်..။ စာကြည့်တိုက်မှာ ဈေးချိူသည်..။ အပြင်မှာထုတ်လျှင်အများကြီးကုန်ကျမည်..။ ထို့ကြောင့်ကျောင်းကိုသွားထုတ်သည်က ပိုကိုက်သည်မို့ စာကြည့်တိုက်သွားချင်နေသော ကျွန်တော့်ဆန္ဒ ပြည့်သွားသည်..။ ကားမှတ်တိုင်ဘယ်ကဆင်းရမလဲ မသိပါ..။ မြေပုံထဲတွင်လည်း စာကြည့်တိုက်ဟု ရေးပြမထားပါ..။ စိတ်ထဲမှန်းကြည့်လိုက်တော့ အိမ်ပိုင်ရှင်ပြောသောစကားအရ အဆောင်ကွေးကွေးကြီးတွင်ရှိရမည်ဟု မှန်းဆကြည့်လိုက်သည်..။ ဟုတ်ပြီ..။ ဒီလောက်ဆို သိပြီ..။ ဟိုမြင်မြင်နေရတဲ့ ကားဂိတ်ရှိတဲ့ အဆောင်ကွေးကွေးကြီး ဖြစ်ရမည်..။ ခဏခဏရောက်ဘူးနေသောအဆောင်ကြီးဖြစ်သည်..။
စမ်းတန်းရမ်းသမ်းနှင့်ရောက်သွားသည်..။ လက်တော့ပါယူသွားလိုက်သည်..။ ကျောင်းအကောင့်ထဲ ဘယ်လိုဝင်ရမလဲ မသိပါ..။ wireless ထဲတော့ ၀င်သွားပါသည်..။ Mozilla မှာ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်အားလုံး ကျောင်း အကောင့်သို့ပြောင်းသွားကြသည်..။ ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့်..။ စိတ်မပူပါ..။ Service ဌာနသို့ ထမေးလိုက်သည်..။ အော်...ကျောင်းမှ username နှုင့် password တောင်းနေသည်ပဲ..။ ထည့်လိုက်တော့ အိုကေသွားသည်..။ ထိုင်သုံးနေရင်း ပရင့်ထုတ်ချင်သည်များကို စတစ်ထဲထည့်လိုက်သည်..။ စတစ်ထဲထည့်ကာ ပရင့်သွားထုတ်ရမလားလို့..။ အောက်က ပရင့်ဌာနသို့ ဆင်းသွားလိုက်သည်..။ မျှားထိုးပြထားသည်..။ ပရင့်ထုတ်ချင်လျှင် Level2ဟု..။ သူများတွေဘယ်လိုလုပ်လဲလို့ ခဏကြည့်နေလိုက်သည်..။ e-Zlink ကဒ်တင်လိုက်သည်..။ သူများလိုထုတ်ချင်သည့်ဖိုင်များ ကျမလာပါ..။ ကျလာရအောင် ဘယ်ထဲထည့်ခဲ့ရလို့လဲ..။ စတစ်ကလည်း တပ်မှမတပ်သေးတာ..။ မဟုတ်သေးဘူး..။ ဘယ်လိုပါလိမ့်ဆိုပြီး ပြန်တက်လာခဲ့လိုက်သည်..။ ကျောင်းမှပေးထားသော ဖိုဒါထဲသို့ထည့်ရမည်ဟု ထင်မှတ်လိုက်သည်..။
သုံးနေရင်း ဖိုဒါထဲထည့်ဖို့လိုက်ရှာရာ ကိုယ်ပိုင်ဖိုဒါ ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာ မသိပါ..။ မပူပါ..။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းအွန်လိုင်းမှာရှိသည်..။ သူ့ကိုလှမ်းမေးလိုက်သည်..။ ဖုန်းဆက်လာသည်..။ ဘာဖြစ်သလဲတဲ့..။ ပရင့်ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲမသိလို့ဟုဆိုတော့ လုပ်နည်းတွေပြောပြသည်..။ ကျွန်တော်နားမလည်ပါ..။ အောက်သို့တစ်ခါပြန်ဆင်းသွားသည်..။ တစ်နာရီအလကားသုံးခွင့်ရှိသော အင်တာနက်များတွေ့ရသည်..။ သူငယ်ချင်းက တစ်နာရီကို ၂၀ ဟု နောက်သည်ကို တကယ်ထင်ကာ သုံးဖို့တွန့်သွားပါသည်..။ သူငယ်ချင်းပြောပြသည်ကို နားမလည်ပါးမလည်နဲ့ အေးအေးဟုပြောပြီး သူငယ်ချင်းက စိတ်လက်မရှည်စွာဖုန်းချသွားသည်..။ ဘယ်ရမလဲ ကျွန်တော်ပဲဟာ ဘယ်သူမှတ်လို့..။ help desk ကိုသွားမေးပါသည်..။ သူတို့ရှေ့မှစက်မှ username password ၀င်ကာ စက်တစ်လုံးသုံးလိုက်ပါသည်..။ ပရင့်ထုတ်ချင်သည်များကို ဖိုဒါတစ်ခုနှင့်စုထည့်လိုက်ပါသည်..။ ထို့နောက်ပရင့်ထုတ်ချင်ကြောင်းသွားပြောလိုက်ပါသည်..။ ဖိုင်များကိုတစ်ခုချင်းဖွင့်ကာ ပရင့်ကိုကလစ်ခဲ့ရုံသာဖြစ်ပါသည်..။ ကိုယ်ပြောင်းချင်သောဖောမက်သို့ ကိုယ့်ဘာသာချိန်ပြောင်းကာ ပရင့်ကိုနှိပ်ခဲ့ရပါသည်..။ ထို့နောက်မှ ပရင်တာခန်းသို့သွားကာ ကဒ်ကိုတင်ပြကာ ပရင့်တာကိုရွေးပေးလိုက်သောအခါ စာရွက်များ ပရင့်ထုတ်ပါတော့သည်..။ ၁.၈၅ ဒေါ်လာသာကုန်ကျခဲ့ပါသည်..။ ပရင့်လည်းထုတ်တတ်သွားပါသည်..။
ထို့နောက် စာများကိုစာကြည့်တိုက်ထဲမှာပဲ ဖတ်သွားမည်ဆိုပြီး စာထိုင်ဖတ်နေပါသည်..။ ကုလားမများ ကုလားများမှာ စကားလုံးအရေအတွက်များလှပါသည်..။ တိတ်ဆိတ်နေသောအခန်းထဲတွင် စကားတိုးတိုးပြောနေသောအသံမှာ သည်းမခံနိုင်စရာဖြစ်ပါသည်..။ နေရာရွှေ့ထိုင်လိုက်ပါသည်..။ ပိုထူးခြားမလာပါ..။ တရုတ်အတွဲတစ်တွဲ စာမကြည့်ဘဲ စကားများနေကြသည်..။ စာဆက်ဖတ်လို့မကောင်း..။ လေသံတိုးတိုးဖြင့် စကားပြောသံမှာ နားကိုလာရိုက်ခတ်နေသည်..။ နားငြီးသည်..။ စကားမပြောရသောနေရာတွင် ထိုကဲ့သို့စကားများနေသည်မှာ နာခံဖွယ်မကောင်းလှ..။ ပြန်လာခဲ့လိုက်တော့သည်..။
စာကြည့်တိုက်က အပြောနဲ့ညီအောင် အေးလွန်းလှသည်...။ ၀တ်လာခဲ့သောအပေါ်ဝတ်မှာ ပါးလှသည်..။ အထူနောက်တစ်ထည် ၀ယ်ရဦးမည်..။ ဒီပုံအတိုင်းဆို မလွယ်ပါ..။
ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ဖို့မေ့လာသည်..။ စာအုပ်တွေနားလည်း မရောက်ခဲ့သေးပါ..။ နောက်နေ့ စာအုပ်သွားဖတ်မှ စာအုပ်တွေအကြောင်းပြောပြတော့မည်..။ သပ်ရပ်သည်..။ သားနားသည်..။ သန့်ရှင်းသည်..။ ကျယ်ဝန်းသည်..။ သက်သာလွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန်စီစဉ်ထားသည်..။ အားလုံး စာကိုအားထုတ်ကျက်မှတ်ရန်သာလိုသည်..။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်မိပါသည်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/04/2010 02:13:00 am0comments
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/03/2010 01:14:00 am0comments
NTU ကျောင်းတွင်ကျောင်းတက်ရန်ရောက်လာသော်လည်း မိုးကြိုးပစ် NTU ကျောင်းသူဟုခေါ်ရပါမည်..။ ကျောင်းမှကျင်းပပေးသော Welcome လိုပွဲမျိူးကို ဘယ်နေ့ကကျင်းပသွားလဲ မသိလိုက်ပါ..။ ဌာနမှလုပ်ပေးသော Orientation ကိုလည်း register လုပ်မိ၊မလုပ်မိပင်မသေချာဘဲ ရောက်သွားပါသည်..။ မမီပါ..။ ပြီးကာနီးမှ မြန်မာမှ ကျောင်းသူများနှင့်တွေ့ချင်၍ စောင့်ရင်း ဗိုက်ပြည့်နေသည်ကို မဆာဘဲ စားလာသေးပါသည်..။ ထိုပွဲ၌ ကျွန်တော့်ကိုအင်တာဗျူးသွားသော ကျွန်တော်တွေ့ချင်နေသော ဆရာကိုတွေ့လိုက်ရပါသည်..။ ရည်ရည်မွန်မွန်နှင့် ကိုရီးယားမင်းသားပုံပေါက်နေသော ထိုဆရာကို ကျွန်တော် သဘောအလွန်ကျပါသည်..။ လုံးဝ gentle ဆန်သော ဆရာပါပင်..။
ပထမလက်ချာနေ့ မမီပါ..။ အဓိကပြဿနာမှာ နက်ဝပ်အကောင့် အိတ်စ်ပိုင်ရာ ဖြစ်သွားခြင်းပင်..။ အိုင်တီဌာနကိုသွားအကြောင်းကြားလိုက်၍ အဆင်ပြေသွားသော်လည်း ကျွန်တော့်စက်နှင့်ဝင်သောအခါ အဆင်မပြေပါ...။ ထို့ကြောင့် လက်ချာပေးမည့် အခန်းနံပါတ် ကျွန်တော် ကြည့်မရခဲ့ပါ..။ အခန်းနံပါတ်မသိရ၍ ကျွန်တော် ဌာနထဲရောက်သော်လည်း အတန်းမတက်လိုက်ရပါ..။ ၎င်းသည် အစဆုံးဌာနသို့ရောက်သည့်နေ့ဖြစ်ပါသည်..။
ယနေ့တွင်မတော့ လက်ချာခန်းသို့ အချိန်ကွက်တိရောက်သွားပါသည်..။ မြင်ဘူးသည့်သူများမဟုတ်၍ အခန်းလွဲနေသည်ထင်သွားမိသော်လည်း ကျွန်တော်ဝင်သည့်အခန်းမှန်ပါသည်..။ ဆရာက လက်ချာစပေးပါသည်..။ ကောင်းလိုက်သည့်ဖြစ်ချင်း..။ ပါဝါပွိုင့်များကို ပရင့်ကြိုထုတ်ခိုင်းထားသည်ဟုဆိုပါသည်..။ ကျွန်တော်နေသောနေရာအနီးတ၀ိုက်တွင် ပရင့်အလွယ်တကူထုတ်နိုင်သောနေရာမရှိပါ..။ ထုတ်ရမည်ဟုလည်း ကျွန်တော်မသိပါ..။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော့်တွင် ဗလာစာအုပ်တစ်အုပ်နှင့် နုတ်စ်ရေးတတ်သည့် စာအုပ်ငယ်မှတစ်ပါး ဘာမှမပါပါ..။ ဘေးနားမှ ဟိန္ဒူမလေးနှင့် ရော၍ကြည့်ပါသည်..။ ခဏနေမှရောက်လာသော မြန်မာညီမလေးမှ သူ့စာရွက်ပေးကြည့်၍ သူနှင့်အတူ ကြည့်ရပါသည်..။ လက်ချာချိန်တွင် ဆရာပြောသည်ကိုသာ နားစိုက်ထောင်မိပါသည်..။ စာရွက်မကြည့်ဖြစ်ပါ..။ စာရွက်ကိုကြည့်နေမိလျှင် ဆရာဘာပြောသွားသည်ကို လွတ်လွတ်သွားတတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်..။
ဘေးနားမှထိုင်သော ကုလားဆင်မျက်နှာနှင့်တစ်ယောက်ကို နိုင်ငံခြားသားထင်မှတ်သောကြောင့် အင်္ဂလိပ်စကားနှင့် အားကြိုးမာန်တက် ကြိုးစားပမ်းစားမေးမိပါသည်..။ စာရွက်ကိုဘယ်လိုပရင့်ထုတ်ခဲ့လဲဆိုသည်ကို သိချင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်..။ မြန်မာလိုပြောလည်းရပါတယ်ဟု ဆိုလာသောအခါမှ အမလေး တမိပါသည်..။ ကြိုးစားပမ်းစားဗျာ..။ မောနေအောင်ပြောရတာ ..။ မြန်မာမှန်းသိရင် မြန်မာလိုပြောမှာပေါ့ဟု အရှက်ပြေဆိုမိရပါသည်..။ စင်ကာပူတွင် မြန်မာမှာ ပေါများလာပါသည်..။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့အလွန်ကောင်းပါသည်..။ ခင်မင်တတ်လျှင် နေရာတိုင်းတွင် မြန်မာများမှာ ကူညီတတ်သည်..၊ မေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်တတ်သည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်..။ ကျွန်တော်က ကူညီလိုက်ဖို့ဝန်မလေးပါ..။ ထိုနည်းတူ မခဲယဉ်းသောအကူအညီများ ပြန်တောင်းဖို့ရန်လည်း ၀န်မလေးမိပါ..။ vice versa ဖြစ်နေပါသည်..။
အတန်းလွှတ်သော ၉ ၃၀ တွင် ကိုယ့်ဘလော့တွင်တင်ချင်၍ NTU ကျောင်းသူကြီး၏ ပထမဆုံးနေ့စွဲကို မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါသည်..။ မီးရောင်အောက်တွင် အရိုက်ခံသည်ကို မှောင်နေပါသည်ဟု စေတနာနှင့်ပြောကာ ရိုက်ပေးသောညီမလေးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါသည်..။
ဤသည်တို့ကား ကျွန်တော့်၏ NTU ကျောင်းတော်ကြီး၏ ပထမဆုံးနေ့စွဲများပင်တည်း..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 9/03/2010 12:53:00 am4comments